အောငျထကျပွောပွလာတဲ့ လှတျမွောကျနယျမွရေောကျနတေဲ့ သူရဲ့ကနျြးမာရေးအခွအေနေ – စှယျစုံသုတ
အိပျမကျဆုံရာပွိုငျပှဲဝငျတဈယောကျ အဖွဈ ပရိသတျတှအေနနေဲ့ အောငျထကျကို စတငျသိရှိခဲ့ရပွီး နောကျမှာတော့ ခုဆိုရငျ ကိုယျပိုငျသီခငျြးခှတှေနေဲ့ စုံတှဲသီခငျြးတှကေို သီဆိုလာတာကွောငျ့ လူငယျတှကွေားမှာ ရပေနျးစားပွီးအောငျမွငျလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ…ပရိသတျအခဈြတျော အောငျထကျဟာ ဖခငျရဲ့
ချေါယူမှုကွောငျ့ ရနျကုနျဆိုတဲ့ မွို့ကွီးကို ကြောငျးတကျဖို့ရောကျရှိလာခဲ့ပမေယျ့ နောကျပိုငျးမှာတေော့ မပွလေညျဖွဈလာတဲ့ မိသားစုစားဝတျနရေေးအတှကျ ကြောငျးထှကျပွီး လှိုငျသာမွို့နယျက စကျရုံတဈခုမှာအလုပျလုပျခဲ့ပွီးအဲဒီကအဆကျအသှယျကနတေဈဆငျ့ အောငျမွငျလာတဲ့သူ့ဘဝရဲ့အကွောငျးကိုလညျး
လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမှာ တငျထားခဲ့ပါသေးတယျ။ ခုမွနျမာနိုငျငံမှာ ဖွဈနတေဲ့အာဏာသိမျးမှုဖွဈနတေဲ့အခွအေနမှော အနုပညာရှငျတျောတျောမြားမြားလညျး ပွညျသူနဲ့အတူ ရပျတညျခဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ. အဲဒီလိုရပျတညျခဲ့တဲ့အနုပညာရှငျတှထေဲမှာ အဆိုတျောအောငျထကျတဈယောကျလညျး ပါဝငျတာဖွဈ
ပါတယျ။ အဆိုတျောအောငျထကျကတော့ လူထုလှုပျရှားမှုကွီးပွညျသူတှနေဲ့တသားတညျးပါဝငျခဲ့ပွီး ဖမျးဝရမျးထုတျခံထားရလို့ထှကျပွေးတိမျးရှောငျနရေတာလညျးဖွဈပါတယျ။အခုခြိနျမှာလှတျမွောကျနယျမွမှောရောကျရှိနပေမေယျ့ကိုဗဈကူးစကျခံထားရတာလညျးဖွဈပါတယျ။အောငျထကျကတော့ ကိုဗဈကူးစကျ
ခံထားရတာ(၉)ရကျရှိနပွေီး ဒီနမှေ့အနံ့စရတယျလို့ပွောာထားပါတယျ။ဒါအပွငျကိုဗဈကူးစကျခံထားရတာ မိခငျနဲ့အပေါငျးအသငျးတှမေသိသေးဘူးလို့ပွောပွထားပါတယျ။ကိုဗဈကူးစကျခံထားရတာမို့အားငယျနမှောတော့သခြောပါတယျနျော. အမှနျတရားကိုရရှိဖို့အတှကျ ပွညျသူတှအေတှကျတိုကျပှဲဝငျနရေငျးနဲ့အ
မွနျနကေောငျးလာဖို့ ပရိသတျနဲ့မိတျဆှတှေကေလညျး အားပေးစကားပွောပေးထားကွတာပါသေးတယျနျော… အောငျထကျကိုခဈြကွတဲ့ Weekly Myanmar ပရိသတျကွီးလညျး အားပေးစကားလေးတဈခုခုလောကျရေးပေးသှားကွပါအုံးနျော..
အောင်ထက်ပြေပြလာတဲ့ လွတ်မြောက်နယ်မြေရောက်နေတဲ့ သူရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေ
အိပ်မက်ဆုံရာပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက် အဖြစ် ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ အောင်ထက်ကို စတင်သိရှိခဲ့ရပြီး နောက်မှာတော့ ခုဆိုရင် ကိုယ်ပိုင်သီချင်းခွေတွေနဲ့ စုံတွဲသီချင်းတွေကို သီဆိုလာတာကြောင့် လူငယ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားပြီးအောင်မြင်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်…
ပရိသတ်အချစ်တော် အောင်ထက်ဟာ ဖခင်ရဲ့ခေါ်ယူမှုကြောင့် ရန်ကုန်ဆိုတဲ့ မြို့ကြီးကို ကျောင်းတက်ဖို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ မပြေလည်ဖြစ်လာတဲ့ မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် ကျောင်းထွက်ပြီး လှိုင်သာမြို့နယ်က စက်ရုံတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးအဲဒီကအဆက်အသွယ်ကနေတစ်ဆင့် အောင်မြင်လာတဲ့သူ့ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုလည်း လူမှုကွန်ယက်
စာမျက်နှာမှာ တင်ထားခဲ့ပါသေးတယ်။ ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာ အနုပညာရှင်တော်တော်များများလည်း ပြည်သူနဲ့အတူ ရပ်တည်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်. အဲဒီလိုရပ်တည်ခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်တွေထဲမှာ အဆိုတော်အောင်ထက်တစ်ယောက်လည်း ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုတော်အောင်
ထက်ကတော့ လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းပါဝင်ခဲ့ပြီး ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံထားရလို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာလွတ်မြောက်နယ်မြေမှာရောက်ရှိနေပေမယ့်ကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်ထက်ကတော့ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရတာ(၉)ရက်ရှိနေပြီး ဒီနေ့မှ
အနံ့စရတယ်လို့ပြောာထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရတာ မိခင်နဲ့အပေါင်းအသင်းတွေမသိသေးဘူးလို့ပြောပြထားပါတယ်။ကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရတာမို့အားငယ်နေမှာတော့သေချာပါတယ်နော်. အမှန်တရားကိုရရှိဖို့အတွက် ပြည်သူတွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေရင်းနဲ့အမြန်နေကောင်းလာဖို့ ပရိသတ်နဲ့မိတ်ဆွေတွေ
ကလည်း အားပေးစကားပြောပေးထားကြတာပါသေးတယ်နော်… အောင်ထက်ကိုချစ်ကြတဲ့ Weekly Myanmar ပရိသတ်ကြီးလည်း အားပေးစကားလေးတစ်ခုခုလောက်ရေးပေးသွားကြပါအုံးနော်..